Dayral Zuur oo cunto hawada looga daadinayo - BBC Somali
Dayral Zuur oo cunto hawada looga daadinayo
Image caption gargaar ayaa horay u gaaray goobo ay mucaaradku haystaan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in ay qorshaynayso in maalmo gudahood ay hawada uga daadiso saad gargaar ah dadka ku nool magaalada Suuriya ee Dayral Zuur.
Magaaladan ku taalla bariga ayaa waxaa go'doomiyay kooxda isugu yeerta Dowladda Islaamiga ah, iyadoo ay ku xayiran yihiin laba boqol oo kun oo qof, Qaramada Midoobayna dhanka dhulka gargaar kuma gaarsiin karto dadkaasi.
Maalintii Arbacada ahayd ayaa gawaari nooca xamuulka qaada ah oo wada gargaar waxa ay gaareen shan magaalo oo go'doonsan oo ku yaala Suuriya, hasayeeshee Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in ilaa iyo 18 deegaan iyo in ka badan hal milyan oo qof ay go'doon ku jiraan oo ay tahay in galaangal joogta ah loo helo.
Ergayga Gaarka ah ee Qaramada Midoobay ee Suuriya, Staffan de Mistura, ayaa isagoo ku sugan magaalada Dimishiq waxa uu sheegay gargaarka Arbacadii la gaarsiiyay deegaanada go'doonsan ay un bilow yihiin.